MAXAA SABABAY NIDAAMKA FEDERAALKA
Eng. Ahmed M. Waharey
Sidaanu wada ogsoonahay Somaaliya waxay lahaan jirtey maamulo dawladeed oo kale duwanaa kuwo shibil ahaa iyo mid militeri ku dhisneyd intaba waxaa madax ka wada ahaa haraagiii xiligii gumaysiga xirfadaha kala duwan ugu shaqayn jirey ciidamadii gumaysiga, kuwaas oo u kala qaybsamay kuwa ay dani ugu jirto:-
(1) In dadku soo doortaan ilaa heer degmo madaxdooda sidii dowlihii shibilka ahaa ee Adaan cade iyo Abdirashiid. taasoo saamaxaysay in degmo waliba hesho nidaam ay ku doorato maamulkeeda kulana xisaabtanto dowlada dhexe barnaamijyadeeda horimarineeed xag dhaqaale iyo xag kaleba.
(2) In dalku noqdo mid leh dawlad dhexe oo militari ah maamulkuna sare uga yimaado dadka. taasoo saamaxaysay in degmo waliba uu maamulo maaamul aaan degaan ahaan degmadaa shaqo ku laheyn una hayn wax lexo jeclo ah horumarkeeda inuu lunsado wixii ka soo baxay oo dhaqaale ah iyo wixii ay ka heli laheyd khasnada dhexe intaas uun meeeha u jooga, ahna midka dhaliyay in dakii soomaaaiyeed inay ridaaaan xukunkaa milatariga ah kana horyimaadaan waxa ala wixii damacsan in ay dib ugu xukumaan nidaamkaas.
Waa Noocee Dagaalka sokeeye ee Somaliya?
Waxgaradka soomaliyeed sida ay wada ogsoon yihiin dagaalka soomaliya ka dhacay waxaa uu lahaa horseedayaal ama abaabulayaal kala siyaasad duwan oo laakiin kala miisaan badan:-
(1) Kuwo kowaad waxay ahaayeen saraakiil dooneysay inay iyana jaanis xukun militari helaan oo ay dib ugu xukumaan soomaaliya. qoladan waxay adeegsatey oo ay dagaalka ku magacawday hadba sidii ay beelahooda uga heli lahaayeen ciidan, inta badan waxay jeclaayeen inay dagaal ku qabsadaan oo aysan umada u ogalaan in wada tahsi umdu yeelan si aan nidaam shibil ah mar dambe dalka uga dhalan.
(2) kuwa labaadna waxay ahaaayeen haraagii xukuumadihii rayadka ahaa ee lixdameeyadii iyaguna waxay damac sanaayeen inay dib usoo ceshadaaan nidaamkoodii militarigu ka inqilaabey1969kii. qoladaan waxay adeegsatay odayaal dhaqameed yadii la xiliga ahaa ee uu caburiyay taliskii militariga ahaa inta badana dagaalada waa ay ka soo horjeeedeen, waxayna ku dadaali jireen in umada somaliyeed ay goboladooda maamulo u samaystaan kalana tahsadaan odey dhaqameeyadooda markaana la isku imaado.
MILICSIGA AXDIGA FEDERAALKA EE SOOMAALIYA
(3) kuwan sedexaadna oo ah qolada ugu awooda badan waxay ahaayeen Bulshada soomaaliyeed oo dhibsaday nidaamkii keligii telisnimada ahaa oo ay aad u dhibsadeen maamulada dusha dowladu uga keeni jirtey deegamadooda kuwaasoo degaan walba kula dhaqmi jirey qeybiyo xukun. dagaaalka ugu xooga badan waxaa uu ka yimi bulshada soomaaliyeed waxaana lagu magacaabay (GO HOME WAR) - (GURIGAAGI AAD) kaasoo macno weyn xambaarsanaa asaasna u ahaa dagaalka sokeeye ee ka dhacay somaliya ilaa hadana ka socda meelo badan oo aan weli laga qaadan GO HOME ka oo ay joogaan dad diidan inay guryahoodi dib ugu noqdaan oo ay maamulo ka soo samaystaan markaas umada soomaliyeed si xaqa maamulka ula qaybsadaan maskax doodana ka saaaran nidaamkii isku dulnoolashaha oo taliskii siyaad bare oo kale inaanu somaali kusoo noqon doonin.
Runtii dagaalka sokeeye ee soomaliya waxaa lagu qeexay uuuna yahay mid ku salaysan GO HOME WAR waxaa kuu cadayn kara dagaalku markii uu bilowday xiligii SSDF, SNM USC, SPM, RRA….iwm. intuba waxa asaas u ahaa in deegaamadoodu GO HOME ka hirgalo kana samaysmo maamul u cuntama degaamadooda.
Dagaalkii ugu weynaa ee Muqdishana markii uu dhacay waxaa GO HOME ka si fudud u qaatey ooo gobolodoodii aadey bulshadii gobalada Waqooyi Galbeed ee muqdisha ku sugnayd waxaana ku sii xigsadey bulshadii gobollada Waqoooyi Bari intoodii Muqdisha ku sugneyd halkaasoo ay degaamadoodi maamulo ka samaysteen nabadna ay ka jirtey 11 kii sano ee ugu dambeysay ilaa haatana ay sugayaan inta gobolada koonfureed GO HOME ku si buuxda uga hirgaleyso.
Meelaha ay nabadu aysan weli ka jirin waa Gobollada Banaadir, Shabeelada Hoose, Jubada dhexe, Jubada hoose waana gobolada ay joogaan weli dadka diidan inay gobollodoodii dib ugu laabtaan una ogolaadan dadka ay dulsaarka ku yinhiin inay maamul u samaystaan degamadooda iyaguna degaankoodii ay ka soo samaystaan. Taas oo asaas u ah in ay shaqeyn waayaan dekadii xamar iyo garoonkii caalimaga aahaa ee Muqdisha loona la yahay kalsooni lagu furo looguna sameeyo maalmul ka kooban deegaamada koonfureed oo isku kalsooon.
Maanta Maxaa Xal u Noqonkara Soomaliya
Runtii qofkastoo waxgarad ah oo soomaliyeed lana socda xaqiiqda soomaliya maanta haysata waa uu garan karaa in ummada ay axal ugu jirto in salka hoose ay haboontahay in laga soo askumo dawladnimada soomaliyeed ilaa heer degmo ama tuuulaba ay maamulada kasoo bilabaan, Beel walibana ay iimansato deeganka ay xaqa u leedahy ayna tahay mida kaliya oo lagu heli karaa Dawlad loo wada dhan yahay lana wada aamini karo.
Xalku waxaa uu noqonayaa in Soomaliya ay Hesho Maamul dhexe oo federaal ah goboladuna ay yeeshaan maamul goboleedyo ku salaysan deegaankooda horumarintiisa iyo ka qayb qaadashada awooda horumarimneed ee dawlada dhexe ee federaalka ah. Runtiii waa sida keliya ay soomaaali uga badbaadi karto marin habawgan siyaasadeed ee lagu radinayo dawlad u shaqeysa sidii tii hore e Militeriga ku dhisneyd dalkoo dhana ka dhigtay magaalo qura iyo talis qura oo diktaytarnimo wax ku maamula.
Xaqiiqdii ma sahalana samaynta Federaalku waxay u baahantahay in la wada raadiyo loona soo wada jeesto lana wada abuuro qaaab siyaasadeed oo lagu dhaqan geliyo sidii uu ku iman lahaa, lana doorta Maamul federaal oo ku meel gaara oo ummada somaliyeed u jeeexa wadadii ay ku dhalan lahayd Dawlad Federaal ah oo xaq u xukunta geyiga soomaliyeeed cidii howshaa gacanta haatan ku haysana lagu taageeero baa kuligeeen inoo habooon maanta.